तपाईंले बिक्री गरेको सवारी साधनको नामसारी गर्नु भयो ? « Naya Page
तपाईंले बिक्री गरेको सवारी साधनको नामसारी गर्नु भयो ?
प्रकाशित मिति : 22 May, 2019 5:04 pm
चितवन, ८ जेठ । गीतानगरका उपेन्द्र पण्डितको मोबाइलमा धादिङका प्रहरी हबल्दारले टेलिफोन गरेर उनको नामको मोटरसाइकल जुधेर मानिसको मृत्यु भएको खबर दिए । पण्डितलाई यो कुरा सुन्ने बित्तिकै छाँगाबाट खसे जस्तो अनुभव भयो ।
आफूले चार वर्षअघि रिकण्डिसन हाउसमार्फत बिक्री गरेको मोटरसाइकल अर्काे मोटरसाइकलमा ठक्कर खाँदा आफैंले बेचेको मोटरसाइकलका चालकको मृत्यु भएको रहेछ । प्रहरीले सो मोटरसाइकल धनी खोज्दै जाँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पण्डितको नाम फेला पर्‍यो । त्यसपछि प्रहरीले कसरी त्यो मोटरसाइकल त्यहाँ पुग्यो भनेर पण्डितको खोजी गर्न थाल्यो ।
रिकण्डिसनमा बिक्री गरेको कागजका कारण पण्डित त बेचे । तर, यस्तै तवरले सवारी साधन बिक्री गरेकाहरु फस्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक शैलेन्द्रकुमार खड्का बताउँछन् । यस्ता घटना धेरै आउने गरेको उनले बताए ।
मोटरसाइकल, गाडी जस्ता सवारी साधन विश्वासमा अरूलाई बिक्री पछि पनि नामसारी नगरी चलाउन दिन नहुने खड्काको भनाइ छ । ती सवारी साधन दुर्घटना हुँदा त्यसको दोषी आफू हुन्छु भन्ने थाहा भई बेवास्ता गर्दा धेरै फस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारी वकिलले सवारी धनीपूर्जामा जसको नाम छ उही प्रतिवादी बनाउने हुँदा धेरैले सानो कमजोरीका कारण ठूलो क्षति बेहोर्न बाध्य भएको खड्काको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौर सवारी साधन बिक्री गरेपछि तत्काल नामसारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । अर्काको सवारी साधन चलाउनेलाई पनि राम्रो नहुने भन्दै उनले यो सन्देश सबै सवारी धनीलाई पुर्‍याउन जरुरी देखिएको जानकारी दिए ।
आफ्ना सवारी साधन बिक्री गरेर नामसारी नगरेकाहरु धेरै रहेका छन् । विश्वासका आधारमा बस्दा सवारी साधन किनेकाले बीमा नगर्ने, सवारी साधनको नवीकरण नगर्ने जस्ता समस्या देखिने गरेको छ । यसको दोषी पनि सवारी धनी हुने गरेका छन् ।
धेरै सवारी साधन पुराना भएपछि बढी बिक्री वितरण हुने गर्दछ । खरिद गरेकाले आफ्नो नाममा नभएमा नवीकरण नै नगरी सञ्चालन गरीदिँदा सरकारी राजश्वमा स्वयम् सवारी धनीको बक्यौता बसिरहने समस्या हुने गर्दछ ।
उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदायमा पुगे–नपुगेको पत्ता लगाउन पाँच हजार नमूना संकलन
काठमाडौं, २६ असार । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौं उपत्यकाका पाँच हजार मानिसको